Imithombo yedatha esekelwayo (abahlinzeki bezindlu abondla ngezezindlu) - I-Real Estate Blog - RealtyWW:
Inethiwekhi yokukhangisa yezezakhiwo - WorldWide
Khangisa impahla / insizakalo
Ngena ngemvume • Bhalisela i-akhawunti yamahhala
Izindlu, amaVillas, amaCottages, ama Town Town
Amagaraji nezindawo zokupaka izimoto
Izakhiwo Zokuthengisa Zezebhizinisi
Izakhiwo zokuqokwa kwamahhala
Izakhiwo Nezindawo Zangaphandle
Abahlinzeki Bezimali Ngezimali
Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya
Izinsizakalo Zokuhlola Ikhaya
Isiqondisi Sabathengisi Bezezakhiwo
Imithombo yedatha esekelwayo (abahlinzeka ngempahla yokuthenga izindlu)
Ephreli 21, 2019 by realWW, Ukubukwa okuphelele:
Uma udinga ukudala ukuphakelwa kwedatha ukusebenzisa insiza yethu yokuvumelanisa ungacela enye yalezi zinkampani ezilandelayo ukuthi zikwenzele zona:
XML2U okuphakelayo kwamukelwa ngamaphothali amaningi, amahlelo, ama-verticals, ezokuxhumana, izinhlelo zokusebenza namanye amapulatifomu wokukhangisa emhlabeni wonke kunanoma yikuphi okunye okuphakelayo. Ukuthola isikhathi sokwengeza ukufakwa ohlwini lwakho kumapulatifomu amaningi okuthengisa, kube yinkinga yangempela.
Isixazululo ukuphana kwedatha kusuka ku-XML2U. Okuphakelayo okukodwa konke okudingayo. Bheka ezinye 1000 + ukumaketha amapulatifomu ungahle ubondle kuwo.
Our I-RealBird Ukufakwa ohlwini kwenkonzo yomshicileli kuthatha ukumaketha, futhi ikakhulukazi kuhlu ukumaketha futhi kuholele isizukulwane esikhulu phambili kusuka kubuchwepheshe bewebhu “ejwayelekile”. Ipulatifomu yethu inika amandla ochwepheshe bezindawo ukuthi bathole ukuvezwa okuphezulu kohlu lwabo nge-othomathikhi ukuhwebelana ngohlu lwezezindlu ipulatifomu, amawebhusayithi esakhiwo esisodwa, ukufakwa kuhlu kwamawijethi, ukumaketha kwe-Facebook, ukumakethwa kwamakhodi we-SMS kanye ne-QR code based mobile platform kanye nokuxhumana okwakhelwe ngaphakathi nokuhola amathuluzi wokuthumba.
IDX Broker yakhelwe ukuqoqa, ukuhlela nokulungisa uhlu lwakho lwasekhaya lwe-MLS, ukuvumela ukuthi ubonise ngaphandle komthungo zonke izakhiwo ze-MLS esizeni sakho sendawo ethengiswayo. I-IDX (i-Inthanethi yedatha yokushintshwa) ivumela ama-ejenti nabathengisi ukuthi bafinyelele futhi babonise imininingwane yohlu lwe-MLS kumawebhusayithi abo wezakhiwo. Yaziwa nangokuthi i-Broker Reciprocity, igama elithi "IDX" lisho isoftware, imithetho kanye nemigomo evumela idatha ye-MLS ukuthi ibonise esizeni sakho. Lokhu okuphakelwa kwedatha ngokuvamile kufaka phakathi idatha yohlu yezakhiwo ezifakwe ohlelweni lwe-MLS, ngenkathi imithetho ye-IDX inganquma ukuthi kuphi, yini, nokuthi iboniswa kanjani. Uma i-MLS yakho inikezela ngokufinyelela kulokhu okuphakelayo kwedatha, ungayisebenzisa ukukhuthaza konke ukufakwa ohlwini olufanele kuwebhusayithi yakho, hhayi uhlu lwakho olufakiwe kuphela.
I-IndiaMLS kudalelwe ukunika amandla ochwepheshe bezindawo zokuhlala kanye nokwenza lula ukubambisana ekuvaleni ukuthengiselana kwezezakhiwo ngamathuluzi esoftware sanamuhla. Ngokwenza lokhu, sisiza abathengi / ama-ejenti ukwandisa ukusebenza kwabo, ukusebenza kahle kanye nethuba lemali engenayo, kanye nokuvikela amalungelo abanye.
Uhlu lweNdiya iyinkampani Yezimali Yezinkampani Eziningi Ukuxhuma bonke abahlinzeki bezindlu eNdiya. Kuyisifiso sethu lapho Uhlu lweNdiya ukukwenza kusheshe futhi kube lula ngawe ukuthi useshe futhi uthole indawo ethengiswayo etholakala kulo lonke elaseNdiya ngamawebhusayithi abenzeli bezindlu zethu. Uhlu lweNdiya lungakusiza ekutholeni abahlinzeki bezinsizakalo eziningi ezidingekayo ekuthengisweni kwezezakhiwo. Uhlu lweNdiya libonisa amanye amagama aziwayo futhi ahlonishwa kakhulu ezindaweni zokuhlala.
Mydatafeed.com . Ingabe uyinhlangano yefa futhi unakho okuphakelayo kwempahla okungahambelani namaphothali wesakhiwo ongathanda ukukhangisa ngawo? Singathatha okuphakelayo kwakho okukhona, sikusebenzise ngeSoftware yethu yokuGuqula bese sikuthumela okuphakelayo okudingayo. Okuphakelayo kuzothunyelwa kuwe ngefomethi ye-URL ongakuthumela kwizizinda ezifanele zezindawo.
IdathaExport phatha idatha yempahla yenani elikhulayo lamabhizinisi; ama-ejenti wezindlu, ama-ejenti avumela, ama-ejenti amakhulu ezinkampani, izinkampani zesoftware, izingosi zezakhiwo, amaphephandaba nabaqambi bohlelo lokusebenza. Sichithe iminyaka eminingi sithuthukisa futhi sihlanganisa isoftware yethu kanye nohlelo lokuphakelayo inani elandayo le impahla inthanethi, izinkampani zesoftware namawebhusayithi, yenza lula yonke inqubo yokuphakela wonke umuntu.
Ukuphakelwa Kwempahla Yentengiso iyisevisi yokufaka ingosi yesakhiwo sangempela sesikhathi se-UK nokuthengisa phesheya nokwazisa ama-ejenti. Asinikezi ukuxabana, izindleko eziphansi, isixazululo se-turnkey sabasebenza ngempahla abafuna ukuxhumana nama-Rightmove abo, ama-Primelocation, ama-akhawunti we-OnTheMarket ne-Zoopla ngesikhathi sangempela ngaphandle kokuphatha lezi zingosi ngesandla noma ngokuzimela. Sikusiza ukuthi ususe imisebenzi edla isikhathi kanye nokuphatha okuphindaphindayo ngokunikeza isisombululo sakho konke kukukwenza ukwazi ukuphatha kalula uphinde uvuselele imininingwane yakho yendawo endaweni eyodwa, ngenkathi uzishicilela ngokuzenzakalelayo kuyo yonke insizakalo oyisebenzisayo.
xml Kuhlanganisiwe ihlanganisa zonke izinto ezibalulekile zokuphathwa kwempahla. Uhlelo Lokulawula Okuqukethwe (i-CMS) lwewebhusayithi yakho, Ukuphathwa Kwobudlelwane Nabathengi (i-CRM), ama-XML afaka kuzo zonke izingosi ezinkulu, ukwabiwa kwempahla namanye ama-ejenti kanye nokungenisa impahla. I-xmlCombined futhi inikezela ngezibuyekezo ze-Real Time zamasango azisekelayo kufaka phakathi i-Zoopla ne-Rightmove, ikunikeza inketho yokubonisa izakhiwo zakho ezintsha nezilungisiwe ngokushesha kumanethiwekhi asemqoka.
Okuphakelayo Kwezakhiwo ithuthukiswe ngokuqondile ukusiza abathuthukisi bendawo nabathengisi bezindawo emhlabeni wonke bezimaketha izakhiwo zabo kumashumi ezigidi zabathengi abaqondisiwe ngokumane futhi kubize ngempumelelo.
I-Neoo.com Sizimele ngakho-ke sivumela futhi sithengise uhlu lwakho lokuqashisa kumawebhusayithi aqashisayo amakhulu ngokuchofoza okukodwa kufaka phakathi iVictoria.com, Rent.com, i-Homes.com nezinye eziningi. Inethiwekhi yethu yokuthengisa iqukethe izizinda zokuqasha ezinkulu kakhulu nezivakashelwa kakhulu online.
I-QuantaTec yinkampani yaseLondon esetshenziselwa ukwakhiwa kwewebhu Design and Development, sikhethekile ukuhlinzeka ngokuzinikela Ukuthuthukiswa KweWebhusayithi, Izixazululo Zesoftware, Ukusingathwa kweWebhu, Ama-imeyili AmaBhizinisi, i-SEO kanye nezinsizakalo Zokumaketha kwe-Intanethi Kwama-Estate Agents, Abathengisi Bezezakhiwo kanye nama-Agency Letter - konke kungaphansi kophahla olulodwa!
I-RentLinx Ukuhlanganiswa kweWebhusayithi kwenza kube lula ukwengeza ukufakwa kuhlu kwakho kwempahla nokusebenza kosesho kuwebhusayithi yakho. Yenza ngokwezifiso izingqikithi zethu ukuze zihambisane nokwakhiwa kwesayithi lakho futhi uphathe konke ngeRentLinx.
I-RealShout. Ukuheha kalula abaqashisi nabathengi! Joyina okwethu phezu 15,000 amakhasimende asebenzisa uhlelo lokukhangisa lweRealout ukuxhuma kalula nabaqashi nabathengi abengeziwe.
Prop Idatha inkampani yezentengiso eyedijithali egxile kuphela ekuthengiseni izindlu nomhlaba kwi-intanethi. Indlela yethu ukukhomba ngokuqhubekayo lapho abathengi bakho, abathengisi, abanikazi bezindlu nabaqashi beqala khona ukusesha kwabo i-ejensi yempahla noma impahla online bese bekuhlinzeka ngemikhiqizo emisha yokuthengisa nezinsizakalo zedijithali ukukusiza ufinyelele ngempumelelo, uhlanganyele futhi ekugcineni uguqule imakethe yakho ebekiwe ekuholeni okuphezulu. Ipulatifomu ye-Prop Idatha ikuvumela ukuthi ubambe ukufakwa kuhlu kube kanye bese uzakhela ngokuzenzakalela ukubonakala kwemakethe okuphezulu kwemikhiqizo yakho yezezakhiwo kanye nohlu ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, okuqukethwe, injini yokusesha, i-imeyili, iziteshi zezindawo zokuxhumana kanye neziteshi zomphakathi zokuxhumana.
realWW April 21, 2019
Le entry safakwa ngo Ibhizinisi Lezakhiwo futhi umake Ukufakwa ohlwini kohlu. Bookmark Permalink.
Kwangathi 2, 2018 Ukufakwa ohlwini ku-RealtyWW Ukufakwa ohlwini kohlu kuyindlela yokudlulisa imininingwane kuhlelo lwe-MLS kwamanye amawebhusayithi. Lokhu kungenziwa yizinkampani zangaphandle ezifaka kuhlu ukufakwa kuhlu, izinkampani ezihlinzekela ama-IDX ama-ejenti, noma amawebhusayithi anezinkontileka. Isu-izingxenye ezintathu lokukhuthaza ibhizinisi lakho nokukhulisa ukuthengisa kwakho: Ubambiswano - Iba ngumlingani womunye wamaphethelo amakhulu wempahla emhlabeni Ukuvezwa - Thengisa amakhaya akho ezigidini zabathengi abangabakhona ngokusebenzisa okuphezulu […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
July 1, 2017 Ama-Continuication Abahlanganyeli be-RealtyWW Info - Inethiwekhi Yezentengiso Yezindawo Zokuhlala Umhlaba wonke Ukuqinisekisa ukuboniswa okuphezulu kakhulu kohlu lwakho oluthunyelwe kwiwebhusayithi yethu uhlelo lwethu luzisabalalisa ngokuzenzakalela kuma-aggregator amakhulu nezinhlelo zokucinga zomhlaba. Ngezansi ungathola uhlu lwabalingani bethu amawebhusayithi: I-Claz.org iyi-database ehleliwe. Ngemuva kwezinyanga ze-10 zokuthuthuka nokuhlolwa kwe-beta Claz.org manje isilungele ukuvala igebe phakathi kwabathengi abazimele nabashicileli bezikhangiso ngokuletha imiphumela kusuka kumasayithi amaningi we-200 aqokiwe, lasendaweni […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
January 19, 2017 Ukuthengisa Ikhaya Ngokusebenzisa Izinkundla Zokuxhumana Zomphakathi Iningi lethu lijoyina izinkundla zokuxhumana ezifana ne-Twitter, Facebook ne-Instagram ukuxhumana nabangane nabathandekayo. Imithombo yezokuxhumana ekuqaleni ibisetshenziselwa ukuthumela izithombe, amavidiyo kanye nokuthunyelwe kombhalo okubonisa ukuthi yini umuntu ayefuna ukuyenza. Kodwa-ke, amapulatifomu ezokuxhumana akhule kakhulu eminyakeni edlule futhi manje asetshenziselwa ukukhuthaza amabhizinisi kanye nemikhiqizo. Namuhla, abantu basebenzisa la mapulatifomu ukuthi bathengise amakhaya abo. Abathengisi bezindlu nabathengi basebenzise kahle amathuba emithombo yezokuxhumana […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
February 4, 2019 Umhlahlandlela omfishane: Ukwenza Iwebhusayithi Yakho Yezakhiwo Iphumelele Izindlela ezahlukahlukene zingasetshenziswa ukumaketha iwebhusayithi yezezakhiwo. Lo mbhalo unikeza imininingwane ngezindlela zokuthengisa iwebhusayithi yezezakhiwo. Uma unewebhusayithi, akusho ukuthi uzothola abathengi abangena kwiwebhusayithi yakho beyofuna izinsizakalo zakho. Ngaphandle kokuba newebhusayithi, udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi uyenzile iwebhusayithi ngendlela yokuthi izivakashi zizofika zizosala kusayithi njengoba zibhekabheka ngezinsizakalo zakho. Ukwakha amawebhusayithi ama-realtors adinga […] Posted in Ibhizinisi Lezakhiwo
December 7, 2016 Izeluleko ze-4 Instagram ze-Estate Agents Abanikezeli bezindlu abaningi babanjwa ngabezindaba zenhlalo. Ngeshwa, azizwa impumelelo enkulu ngenxa yokuntuleka kokuzinikezela nokusetshenziswa okungalungile. Noma kunjalo, lokhu akusho ukuthi kufanele uyeke ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana. Ukuba khona kwabezindaba kwezokuxhumana kubalulekile kuwo wonke umenzeli wezindlu. Ukugxila okuyinhloko kwemizamo yakho yokumaketha kufanele kube ukungena kubabukeli abaningi. Lezi zinsuku, kunezinkundla ezinkulu zemidiya yezokuxhumana, noma kunjalo, lokhu kungaba nzima ukuthola ukuthi iziphi ezisebenzayo […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
February 6, 2017 Amapulatifomu e-commerce e-6 ahamba phambili wamabhizinisi amancane Osomabhizinisi abancane namuhla banesikhathi esanele sokuqhuba amabhizinisi abo ngenxa yentuthuko yezobuchwepheshe. Noma ngezidingo zawo ezahlukahlukene, ukuphatha nokuhlela ibhizinisi kushesha futhi kusebenza kahle. Isoftware e-commerce ehlukahlukene iyatholakala, engahle ifaniswe nemikhiqizo kanye nesabelomali sabaninimabhizinisi. Ngaphambi kokuqhubeka nokunye, ake siqale sikhombe ukuthi yini umnikazi webhizinisi angayidinga. Uma uqala ukubuka amapulatifomu e-commerce, uzohlangana nalezi […] Posted in Ibhizinisi Lezakhiwo
Kwangathi 29, 2017 I-5 Imibono yeBhizinisi leZakhiwo eziNgcono kanye namathuba e2017 Ukuthengiswa kwezakhiwo kubukeka kungenye yezimboni ezinkulu lapho amathuba amabhizinisi ekhona kuwo wonke amagumbi. Abaninimabhizinisi abaningi kulo mkhakha bathi ziningi izindlela zokuthola inzuzo. Lo ngumsebenzi oguquguqukayo okufanele ube nawo ngoba ungabeka uhlelo lwakho futhi uqiniseke ngamakhono akho okuhola wonyaka. Nayi imibono yebhizinisi lendawo ethengiswayo ye5 uma ufuna ukungenela lo mkhakha. I-1. Umenzeli Wezezakhiwo Umsebenzi wakho ukwenza njengomxhumanisi phakathi kwabathengisi nabathengi […] Posted in Ibhizinisi Lezakhiwo
September 9, 2019 Izinkampani Zokuthengiswa Kwezezakhiwo Zisebenza Kanjani Zithola Kumsebenzi Wezobunjiniyela Ochwepheshe Ibhizinisi lendawo ethengisa izindlu nomhlaba liyancintisana kakhulu, futhi izakhiwo ezinikeza inani elingeziwe yizo eziheha kakhulu abaqashi. Ukubonakala kwempahla kubalulekile, kepha ukusebenza kwezinhlelo zokwakha nakho kubalulekile. Abaqashi abaningi banika kuqala izici ezifana nekhwalithi yokukhanyisa, izinga lokushisa elingaphakathi ngaphakathi, ukusebenza kahle kwamandla nokuvikelwa komlilo okuthembekile. Inkampani yobunjiniyela ingasiza abathuthukisi ukuthi bathuthukise lezi zici. Inkampani enobunjiniyela efanelekile futhi ingasiza ngekhodi yokwakha […] Posted in Ibhizinisi Lezakhiwo
June 29, 2018 Izingqinamba Zokuthuthukiswa Kokuthengisa Okungaxazululwa ngamathuluzi we-Salesforce Dx IStoforforce yipulatifomu yokusekelwa kwesicelo esekelwe efwini esetshenziselwe ukuthuthukisa izinhlelo zokusebenza eziphawuleka ngebhizinisi. Le pulatifomu inamathuluzi amaningi ongayinikeza abathuthukisi. Phakathi kwalawo mathuluzi, abathuthukisi bangakhetha i-Salesforce Dx ethathwa njengethuluzi elithuthukisayo nelingenamthungo lesisetshenziswa sokuthuthukisa uhlelo lokusebenza. Leli thuluzi liza nezici eziningi ezihlukile nezinzuzo ezahlukahlukene. Ukuze usebenzise leli thuluzi ngendlela efanele futhi uvune zonke izinzuzo zako, kubalulekile ukwazi ezimbalwa […] Posted in Ibhizinisi Lezakhiwo
Izakhiwo Nezindlu Ezihlaza
Ukuthengisa Izakhiwo Nezindawo
Le sayithi isebenzisa amakhukhi: Thola ulwazi oluthe xaxa.
Inethiwekhi yethu: Impahla yase-US | Impahla YamaNdiya | Impahla yase-UK
Uhlu Lwezindawo Zokuthengisa Umhlaba wonke
Le webhusayithi isebenzisa ngokuziqhenya isoftware yomthombo ovulekile I-Osclass.